‘लि भिङ टुगेदर’ जोडीको भर आ ई-पिल चक्कीमा – Jagaran Nepal
०३ आश्विन २०७८, आइतबार
‘लि भिङ टुगेदर’ जोडीको भर आ ई-पिल चक्कीमा
Jagaran Nepal आइतबार, भाद्र १३, २०७८
काठमाडौं । ‘लि भिङ टुगेदर’ रहेका जोडी असुर क्षित ग र्भ रोक्न ७२ घन्टे चक्की आई–पिलमा निर्भर रहने गरेको पाइएको छ ।
उनीहरुको एउटै चाहना हुने गरेको छ–नियमित यौ नसम्प र्क पनि गर्न पाइयोस, अ निच्छुक ग र्भ पनि नबसोस ।’ असुरक्षित यौ न सम्पर्क भएको ७२ घन्टाभित्र ग र्भ रोक्न प्रयोग गरिने चक्की पछिल्लो समय दुरुपयोग हुने गरेको पनि पाइएको छ । वि वाहित महिलाको सवालमा भने निकै कम मात्रामा यो चक्की प्रयोग गर्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
‘पछिल्लो सयम ७२ घन्टे चक्की आई–पिल व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ,’ हाम्रो सहयात्री अस्पताल तथा बर्थिङ सेन्टर जडीबुटीकी मेडिकल निर्देशक एवं बरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. मेनु आचार्य भन्छिन्,‘ यो चक्की प्रयोग गर्नेमा स्कुल कलेजका छात्रा बढी पाइएको छ ।’
सामाजिक संजाल फेसबुक र युट्यूबमा सजिलै हेर्न पाइने अ श्लिल चलचित्र पो र्नोग्रा फीका कारण पनि विपरित लिंगबीच असुरक्षित यौ न सम्बन्ध राख्ने क्रममा बृद्धि भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस
सोच्दै नसोचेको घटना भयो ! प्रहरीलाई भ्यानभित्रै लात्ताले हाने, त्यसपछी के भयो ?
नेपालमा थुनुवालाई कुनै ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरु भाग्ने गरेको खबर सार्वजनिक हुनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ। प्रहरीकै पञ्जाबाट थुनुवाहरु सजिलै उम्किन्छन् र उनीहरुलाई खोज्न फेरि प्रहरीलाई नै सास्ती हुन्छ।यसैबीच प्रहरीलाई लात्ताले हानेर जिल्ला प्रहरी काभ्रेको हिरासतमा रहेका एक थुनुवा फरार भएका छन्। पूर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार ल्याउने क्रममा प्रहरीलाई लात्ताले हानेर काभ्रे महाभार ६ का सुनिल बाइवा फरार भएका हुन्।
उनी चोरी तथा डाँका मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बाइवा फरार भएको स्वीकार गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उनले पानी प्यास लागेको बताएका थिए।पानी खान दिँदा हतकडी टाइट भयो लुज गर्दिनुस् भनेपछि प्रहरीले लुज गर्न खोज्दा लात्ताले हानेर उनी फरार भएका हुन्। उनको खोजी तिब्र पारिएको काभ्रे प्रहरीले बताएको छ।
प्रेमिका फेल हुने डरले ब्रासहित उनकै कपडा लगाएर प्रेमीले दिए परीक्षा, यसरी खुल्यो पोल
प्रेममा र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन् भनिन्छ । यो उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् अफ्रिकी मुलुक सेनेगलका एक युवकले ।उनलाई आफ्नी प्रेमिकाको यतिधेरै माया रहेछ कि प्रेमिकाको नाउँमा उनका कपडा
लगाएर आफै परीक्षार्थी बनेर परीक्षा केन्द्रमा गए । तर २२ वर्षीय ती युवकको त्यो हिम्मत र जुक्ति असफल भयो । केटीको पहिरनमा प्रेमिकाको साटो परीक्षा दिन गएका उनी पक्राउ परिहाले ।
गास्टोन बर्गर विश्वविद्यालयमा पढ्ने खादिम एम्बुप नामका ती युवकले महिलाको जस्तै लुगा लगाए, मेकअप गरे, टाउकोमा स्कार्फ लगाए, कानमा रिङ लगाए । यतिसम्म की छातीमा समेत केही कोचेर ब्रा लगाए ता की ठ्याक्कै केटीजस्तो देखियोस्। यति गरिसकेपछि आफूलाई कसैले पत्ता लगाउन नसक्ने र प्रेमिकाको नाउँमा परीक्षा दिएर प्रेमिकालाई मज्जाले पास गराउन सकिने उनको अभिलाषा थियो ।
उनको त्यो आइडियाले सुरुका ३ दिनसम्म त काम गर्‍यो । आफ्नी गर्लफ्रेण्ड गांगुइ डिउमको नामबाट उनले सुरुका ३ दिनसम्म त्यसैगरी केटी पहिरनमै गएर हाइस्कुल ग्राजुएशनको परीक्षा दिए । तर, चौथो दिन भने परीक्षा केन्द्रका निरीक्षकले उनीमाथि शंका गरे, खासगरी उनको जिउको स्वरुपप्रति ।
उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा वास्तविक पोल खुल्यो । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीलाई लिएर उनी आफ्नो प्रतिक्षामा रहेकी १९ वर्षीया प्रेमिकासामू पुगे ।
प्रहरी तथा प्रेमिकाको अगाडि उनले अनुनय गर्दै आफूले प्रेमिकाको मायामा डुबेर यस्तो जोखिम उठाएको बताए ।उक्त प्रेमजोडीमाथि परीक्षामा नक्कल गरेको तथा ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
उनीहरुलाई अदालतले दोषी ठहर गरेमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि शैक्षिक परीक्षमा सहभागी हुन नपाउने तथा कुनै शैक्षिक उपाधि लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेछन् । साथै उनीहरुमाथि ५ वर्षको जेल सजाय पनि हुनसक्ने बताइएको छ । एजेन्सी
यो फल खान जान्नुभयो भने दाददेखि जन्डिस, मु’टु रोगसम्म चैट यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका
हर्रो अति औषधीय गुण भएको फल सायद धेरैले चिन्नुभएको नै छैन । यो खासगरी कमलपित्तका रोगीका लागि अति नै फाईदाजनक छ । करेलाको रसमा हर्रोको धुलो हालेर नियमित खाँदा जन्डिस निको हुन्छ । कागतीको रसमा हर्रो मिसाएर लगाउँदा दाद निको हुन्छ ।
यसैगरी हर्रोको सानो टुक्रा मुखमा चपाएर राख्दा मुखभित्र आएको घाउ, खटिरा आदि निको हुन्छ । यो खाएमा भोक नलाग्ने समस्याबाट समेत राहत मिल्छ । नियमित हर्रो खाएमा पेट सफा हुन्छ ।
एसिडिटी बढ्ने, पेटमा ग्यास भरिने र कब्जियत हुने समस्याबाट बचाउँछ । हर्रोको चूर्ण कालो नुनसँग मिलाएर खाँदा कफ निको हुन्छ । त्यस्तै, हर्रोले अनावश्यक बान्ता आउनबाट पनि रोक्छ ।
यो पनि पढ्नुस: यी अंगहरुमा कोठी छ भने तपाईको हातमा पैसा कहिले पनि टिक्दैन: शास्त्रमा लेखिए अनुसार हाम्रो शरीरमा हुने कोठीको धेरै नै महत्व रहन्छ । हामीले जति पैसा कमाएपनि हाम्रो यी अंगहरुमा कोठी छ भने हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन । समुन्द्रशास्त्रका अनुसार हाम्रो शरीरमा हुने कोठीहरुले सबै ठाउँबाट फरक अर्थ दिई राखेका हुन्छन ।
सबै कोठीहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छ । कतिपय भागमा हुने कोठीले हाम्रो जीवनमा धेरै राम्रो फल दिएका हुन्छन भने कतिपय ठाउँमा हुने कोठीले नराम्रो फल दिएका हुन्छ । हाम्रो शरीरको यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिहरुको हातमा पैसा टिक्दैन हेर्नुहोस ।
१. बायाँ गालामा कोठी हुनु खर्चालु हुने लक्षण हो । यस्ता ब्यक्तिको हातमा पैसा परे पनि खर्च भई हाल्छ । बचत गर्न सक्दैनन् ।
२. तल्लो ओंठमा कोठी छ भने धनको कमी हुन्छ । तर उपल्लो ओंठमा कोठी भएका ब्यक्ति भने कामुक हुने समन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । ३. बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु पनि खर्चालु हुन्छन् । यिनीहरुबाट पैसा बचत हुनु सम्भव छैन ।
४. बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । ५. चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् ।
६. हत्केलामा वृहस्पति पर्वतमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले पनि धन बचाउन सक्दैनन् । यिनीहरुलाई पैसा हात लागेपनि बचत हुँदैन ।
७. बायाँ आँखीभौंमा कोठी भएका ब्यक्ति पनि खर्चालु हुन्छन् । उनीहरुले विलासितामा पैसा खर्च गर्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । ८. बायाँ आँखामा कोठी हुनु पनि रोगमा पैसा जाने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिको पैसा उपचारमा बढी खर्च हुन्छ ।
बलिउड कि यी चर्चित अभिनेत्रीले किन सैफलाई अ’प’हरण ग’र्न चाहन्थिन् ? खुल्यो यस्तो रहस्य
एजेन्सी – बलिउड अभिनेता सैफ अली खानलाई दर्शकमात्र होइन, फिल्मकर्मी पनि उत्तिकै मनपराउछन् । अझ उनलाई मनपराउने अभिनेत्रीको संख्या उल्लेख्य नै छ । अभिनेत्री परिणीति चोपडा सैफलाई निकै मनपराउछिन् । उनी आफ्नो क्रश नै मान्छिन् ।
सैफप्रति परिणीतिको आशक्ति कतिसम्म छ भने उनी सैफलाई अ’पहरण ग’र्न पनि पछि नपर्ने योजनामा छिन् । ‘द कपिल शर्मा शो’को एक भागको क्लिप युट्यबुमा बलिउड गसिप गर्लको पेजले सार्वजनिक गरेको छ ।
एकपटक सैफ आफ्नो फिल्मको प्रमोशनका लागि कपिलको शोमा पुगेका थिए । त्यहाँ कपिलले सैफलाई परिणीतिको त्यो क्लिप देखाइन्, जहाँ परिणीतिले सैफ प्रति आफ्नो प्रेम देखाएकी थिइन् । त्यहाँ परिणीतिले मौका मिलेमा आफूले सैफको अ’प’हरण ग’ र्ने बताएकी थिइन् । उनले आफ्नो कुरा सैफकी अभिनेत्री पत्नी करीना कपूर खानलाई पनि जानकारी भएको बताएकी थिइन् ।
यो भिडियो हेरेपछि कपिलले सैफसँग उनको प्रतिक्रिया लिन खोजेका थिए । तर सैफले केही बोल्न सकेनन् । किनकी उनीलाई के बोल्ने भन्ने समेत थाहा भएन ।
यसअघि करण जोहारको शोमा पनि परिणीतिले सैफ आफूलाई निकै मनपर्ने बताएकी थिइन् । उनले सैफका लागि जुनसुकै कुरा पनि ‘हुन्छ’ भन्न तयार रहेको खुलाएकी थिइन् ।
बालकोटमा ओलीको ‘डान्स’
काठमाडौं : माधव नेपाल समूहले नयाँ दलको मान्यता पाएकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा नाचेको भिडियो चर्चित भएको छ। तर नेपालको दलले मान्यता पाउनु र ओलीले नाच्नुमा भने कुनै सम्बन्ध छैन। पत्नी राधिकाको जन्मदिनमा भएको जमघटमा ओलीले आफैँले लेखेको गीतमा नाचेका हुँ ।
राधिकाको जन्मदिनको अवसरमा ओली निवासमा बुधवार बेलुकी कार्यकर्ताको जमघट भएको थियो। कार्यकर्ताले ओलीलाई आफैँले लेखेको गीत ‘म त कति भाग्यमानी‘’ मा नाच्न आग्रह गरेका थिए । कार्यकर्ताको आग्रहलाई ओलीले नकार्न सकेनन । त्यसपछि उहाँ गीतको तालमा केहीबेर छमछम नाच्नुभएको हो । उनी सबै कुराको ज्ञाता छन् भनेर पनि आरोप लाग्ने गर्छ।
उनी जुसुकै विषयको प्रवचन दिनमात्र होइन् नाच्न पनि सिपालु छन भन्ने कुरा बुधबार राति नै सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनी ह्याप्पी मुद्रामा मन लगाएर नै नोचेको देखिन्छ। राजनीतिबाहिर व्यक्तिगत जीवनमा ठट्यौलो र रसिक रहेका उनी पार्टीका कार्यकर्ताहरु माझ यस्तै अवतारमा पेश भए। बालकोटस्थित उनकै निवासमा पत्नी राधिकालाई जन्मदिनको शुभकामना दिन पुगेका युवा, विद्यार्थी नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ताका माझ उनी रसिक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन्।
यु’वतीहरुले नुहाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सोच्छन पत्याउनु हुन्छ
यौ,;न स म्प र्कबाट श्रीमती स’न्तुष्ट भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? : डाक्टर यस्तो भन्छन
नियमित शा,रीरिक स,म्बन्ध राख्ने म हिलाहरु कसरी चि निन्छन् ?
बिहेअघि शा री रि क सम्पर्क गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
छाति चाहेजति पुष्ट बनाउने घरेलु उपाय
दुलहीको उत्तेजनाले एकै रातमा दुलहालाई पुरायो अस्पताल, दुलहा भन्छन उनी धेरै ……